जब भर्ना भएका संक्रमित सपिङ गर्न र होटलमा खाना खान जान्थे, वीर अस्पताल बसाइबारे ब्लग – Clickmandu
जब भर्ना भएका संक्रमित सपिङ गर्न र होटलमा खाना खान जान्थे, वीर अस्पताल बसाइबारे ब्लग
कमलकुमार बस्नेत २०७७ कार्तिक २ गते १५:३४ मा प्रकाशित
विध ल्यावमा परीक्षण
चार दिनसम्म लगातार ज्वरो, रुघाखोकी र गन्ध थाहा नपाउने लगायतका लक्षण देखिएपछि म ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको ‘विध ल्याव’मा दोस्रो पटक कोरोना परीक्षण गराउन गएको थिएँ ।
यसबारेमा घरमा कसैलाई भनेको थिइन । तर लक्षण देखिएको पहिलो दिनदेखि नै आफ्नो कोठामा ‘सेल्फ आइसोलेटेड’ भएको थिएँ ताकी अरुलाई संक्रमण नहोस् ।
मंगलबार कोठामा बसेर एक्लै खाना खाँदै गर्दा मोबाइलमा म्यासेज आयो । कम्प्युटर खोलेर लगइन गरेर हेरे । नतिजा ‘पोजिटिभ’ थियो ।
अपेक्षाभन्दा विपरीतको नतिजा पत्याउन मलाई गाह्रो भयो । त्यसैले मनलाई सान्त्वना दिँदै ‘रिचेक’ गरेँ । तर जति पटक चेक गरे पनि पोजिटिभ रिपोर्ट नेगेटिभ हुने वाला थिएन ।
पोजिटिभ रिजल्ट, त्यसमाथि सबै खाले लक्षण पनि भएकाले घरमा बस्ने अवस्था रहेन । होटल, अस्पताल कता मिल्छ खोज्न थाले ।
यसैक्रममा वीर अस्पतालमा डा. अच्युत कार्कीलाई फोन गरेर सबै लक्षणबारे जानकारी गराएँ । त्यसपछि उहाँले बोलाउनु भयो । र, असोज १३ गते मंगलबार राति ९ बजेतिर वीर अस्पतालको बेड नम्बर ३ मा भर्ना भएँ । र, लक्षण अझै बढ्यो र जोखिम भए पनि अस्पतालमा भर्ना हुन पाएँ भन्ने तर्कले ढुक्क भएँ ।
म भर्ना भइसक्दा पनि ५/७ वटा बेड अझै खाली थिए । तर त्यसपछिका दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेड अपुग हुन थाल्यो र हाम्रो वार्डसँगै रहेको एचडीयूका ८ वटा बेडमा पनि संक्रमितहरु राख्न थालियो ।
यस ब्लगमा आफ्नो दैनिकी लेख्दिन । त्यसमाथि अरुको दैनिकी कसैलाई रुचिकर हुने कुरा पनि भएन । त्यसैले यस ब्लगमा अस्पताल बसाइको अनुभवसँगै राम्रा र नराम्रा दुबै पक्ष जस्ताको त्यस्तै उतार्ने प्रयास गर्नेछु ।
सबैभन्दा पहिले राम्रो पक्षबाटै शुरुवात गरौं ।
अलिकति स्वार्थी भएँ हुँला तर मैले अस्पतालमा सहजै भर्ना पाएँ । घरमा बसेर जोखिम बढाउनबाट बचेँ । यसअर्थमा मेरा लागि राम्रो भयो । यो मेरा लागि सकारात्मक पक्ष नै थियो । म जस्ता संक्रमित जाे अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न पाएका छन् ती सबै भाग्यमानी भए । जुन सकारात्मक पक्ष भयो ।
आफ्नै घर भए पनि आइसोलेसनमा बस्नका लागि कोठा छैन ।
लकडाउनका कारण समयमै डायलिसिस गर्न नपाएकी संक्रमित
तल्लो तलामा बस्ने परिवारलाई पनि जोखिम बढाउने कुरा भएन । माथिल्लो तलामा २ जना साना छोरीहरु, गत जेठमा मम्मीको अप्रेसन भएको र भाउजु पनि बिरामी नै भएपछि घरमै बसेर सबैलाई जोखिममा पार्न भएन ।
वीर अस्पतालमा अर्को राम्रो पक्ष भनेको समयमा खाना खान पाइन्छ । बिहान ७ बजे दुध र बिस्कुट, १० बजे दाल, भात, तरकारी र मासु । दिउँसो २ बजे दुध, अन्डा र चना अनि साँझ ६ बजे दाल, भात र तरकारी पाइन्छ ।
त्यसबाहेक यी चारवटै समयमा सिटामोल, जीवन जल, कफ सिरफ, भिटामिन डी, सी र बी कम्प्लेक्सका चक्कीलगायतका औषधि पनि नियमितरुपमा नर्सहरुले ल्याइदिनु हुन्छ । बिरामीका लागि अक्सिजनको पाइप सबैको बेड नजिकै छ । त्यसबाहेक अन्य रोग हुनेका लागि थप औषधिको पनि सुविधा छ ।
यस्तो जोखिम अवस्थामा पनि उपचारमा दिनरात नभनी खटिनु हुने सफाई कर्मचारीहरु, खाना पकाएर नियमित रुपमा खाना दिने सबै दाई तथा दिदीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद । र, उत्तिकै जोखिम लिएर सेवा गर्ने नर्स, डाक्टर र अस्पताल प्रशासनलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यी त भए राम्रा कुरा । अब केही आलोचनासहित, अस्पतालका कमी कमजोरीलाई आफ्नो अनुभव समेतलाई जोडेर उल्लेख गर्छु । त्यो पनि सजिलो भाषामा ।
१) कोरोना संक्रमितको कुरुवा
कोरोना संक्रमित भइसकेपछि आइसोलेसनमा राख्नु भनेको अन्यको पहुँचबाट टाढा राख्नु हो । तर वीर अस्पतालमा संक्रमितसँगै मज्जाले कुरुवा बस्न पाइन्छ । त्यो पनि ३/४ जनासम्म बसेको आफैले भोगियो । कुरुवा नबस, हामी उपचार गरिहाल्छौं भन्ने र कुरुवा बस्न रोकतोक गर्ने कोही छैनन् । यसबारेमा मैले अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीलाई पनि जानकारी गराएको थिएँ । तर सुधार भने भएको छैन । आशा छ आगामी दिनमा त्यो पनि धेरै हदसम्म सुधार हुनेछ ।
आइसोलेसनको वार्डमा भएका एकाध बिरामीहरु सामान किन्नका लागि महाबौद्य, न्यूरोड, असनसम्म पुग्थे । शरीर अलिकति तंग्रिएपछि अस्पतालको खाना मीठो हुने कुरा भएन । बिहान, साँझ होटलमै पुगेर खान्थे । फर्किएर अस्पतालको बेडमा सुत्थे । उनीहरुलाई रोक्ने कोही थिएन् ।
कतिसम्म भने किड्नी खराब भएर डायलिसिस गर्न आएको कोरोना संक्रमित बिरामी अस्पताल बाहिर गएर चुरोट खाँदा, अस्पतालको आइसोलेसन वार्डको कुनापट्टीको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै चुरोट खाँदा समेत कसैलाई जानकारी छैन । वास्ता पनि छैन । कसैले कुनै पनि प्रकारको निगरानी, अनुगमन नगरेपछि, आवतजावतमा रोक नलगाएपछि को आयो, को गयो भन्ने रेकर्ड नै नराखेपछि यो हुनु स्वभाविक नै थियो ।
मेरो अस्पताल बसाइको अन्तिम तिर एकजना भाइ संक्रमित भइ अस्पतालको बेड भर्ना भएका थिए । उनको आमा ढोकाबाट भित्र एकपटक पनि पस्नु भएन । तर छोरा भोलिपल्ट दिउँसो साथी बोलाएर बजार घुम्न हिँडेछ । साँझपख आयो । खाना ल्याएर मैले टेबुलमा राखिदिएको थिए । तर उसले त साथीको घरमा गएर खाना खाइवरी आएको रहेछ । एकलट त झनक्क रिस उठ्यो तर के गर्नु सम्झाएर लाग्ने भए पो । अर्को दिन पनि त्यो भाई साथीसँग खोइ कता हिँड्यो दिनभरी गायब भयो ।
३) उपचार पाउन समस्या
यो वीर अस्पतालको मात्रै समस्या होइन भन्ने लाग्छ । हामी हरेक दिन कोरोना संक्रमित भइ मृत्यु भन्ने समाचार पढ्छौं । हरेक दिन बढ्ने संख्या गन्दै चिन्ताजनक भावमा समवेदना प्रकट गर्छौ । तर बिरामीले उपचार पायो कि पाएनन भन्नेतर्फ सोच्दैनौं । एकपटक त्यता पनि सोच्ने कि ।
उदाहरण हेरौं ।
जसले रिपोर्ट ढिलो हुँदा समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाइन
मेरो बेडको दायाँपट्टीको बेडमा एकजना किड्नी खराबी भएपछि सातामा ३ पटकसम्म डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामी थिइन । लकडाउनका कारण डायलिसिस नियमित हुन सकेन ।
अन्य अस्पतालमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म छुनै नमानेपछि उनी वीर अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएपछि आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएकि थिइन् ।
उनको समस्या कोरोनाभन्दा बढी समयमै डायलिसिसको उपचार नियमितरुपमा समयमै नपाउनु थियो । रिपोर्ट आउँदासम्म ४/५ वटा डायलिसिस ‘मिस’ भइसकेको थियो । अस्पतालमा भर्ना भएको दोस्रो दिन डायलिसिस भयो । डायलिसिस भएको केही घण्टामै ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
अस्पताल भर्ना भएको दोस्रो दिन, लक्षणहरु अझै बाँकी थिए । त्यसमाथि आँखै अगाडि बिरामीले श्वास फेर्न छाडेको देख्दा त्यो बेला मनमा के भयो होला भन्ने अहिले व्याख्या गर्न सदिक्न ।
यस प्रकारको घटना सबै बिरामीको हकमा उस्तै रहेछ । कोरोना संक्रमित भएपछि अर्को रोगको उपचार पाउन साह्रो गाह्रो । रोककराइ गर्दा पनि नपाइने ।
उनको मृत्यु भएको तेस्रो दिन ७ नम्बर बेडमा ७७ वर्षे आमा हुनुहुन्थ्यो । आमाको कुरुवा उहाँका छोरा हुनुहुन्थ्यो । हिजोसम्म ठमठम हिँडेर ट्वाइलेट जाने, थोरै भए पनि आफै खाना खाने उहाँ एक्कासी गम्भीररुपमा बिरामी हुनु भयो । ट्वाइलेट जान बेडबाट उठ्ने वित्तिकै भुँइमा लड्नु भयो । वान्ता पनि गर्नु भयो ।
हामी सबै जना नर्स र डाक्टर बोलाउन गयौं । एक घण्टासम्म पनि डाक्टर नआएपछि ५/७ जना गएर करायौं । नर्स आएर अक्सिजन दिनु भयो । त्यसपछि डाक्टर आएर उपचार गर्नु भयो । स्लाइन चढाएर जानु भयो । भोलिपल्टसम्म आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गयो । यदी समयमै डाक्टर नआएको भए, समयमै उपचार नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने त यो ब्लगमा यसअघि नै लेखिसकेको छु ।
शव प्याक गर्दै हामी ।
४) आईसीयू र भेन्टिलेटर
यो वीर अस्पतालको मात्रै होइन अहिले देशभरीका अस्पतालमा समस्या हो । त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यसमा कोरोना संक्रमण शुरु भएपछि कति आईसीयू र भेन्टिलेटर थपिए भन्ने अर्को पाटो भयो । संक्रमितले आईसीयूमा उपचार नपाएपछि अर्को रोग अझ बल्झिँदै जान्छ र उपचारको अभावमा ज्यान जान्छ । एकजना किड्नीकै बिरामी बुबालाई अस्पताल भर्ना भएकै दिन आईसीयूको जरुरी थियो । अक्सिजन लगाएर केही दिन आइसोलेसन बेडमै राखियो । पछि खोइ कुन मन्त्रालयमा हो भनसुन गरेर अथक प्रयासपछि आईसीयूमा बेड पाउनु भएछ । केही दिन आईसीयूमा उपचार गराएर फेरि वार्डमै फर्किएपछि उहाँका कुरुवा पत्नी र छोरीसँग सोधेपछि मैले थाहा पाएको थिए । मन्त्रालयमा भनसुन नगरेको भए त कसरी पाइन्थ्यो होला र दाइ भन्दै ती बहिनीले मलाई भनेकि थिइन ।
५) भर्ना भएको बिरामी झोला राखेर घर गएपछि
अस्पतालमा एकदिन साँझपख एकजना कोरोना संक्रमित भर्ना भए । उनी पनि किड्नी खराब भएपछि नियमितरुपमा डायलिसिस गर्नुपर्ने रहेछ । अस्पतालको फिमेल सर्जिकल वार्ड जो अहिले आइसोलेसन वार्ड भएको छ त्यसमा भएको बेड नम्बर १९ मा भर्ना भएका थिए । उनीसँगै आएका एकजना साथीले ‘बेड सिट’ मागेर ल्याए, बेड पनि मिलाए । आफूले ल्याएको ब्याग बेडमाथि गाडीमा सिट बुक गर्दा रुमाल राखे रिजर्भ गरे जस्तै गरेर बाहिर निस्किएँ ।
भोलिपल्ट दिउँसोसम्म पनि उनी नआएपछि ब्यागलाई छेवैमा मिल्काइयो । बेड सिट फेरेर अर्को संक्रमित त्यही बेडमा भर्ना भए । उनी भगुवाको लिस्टमा परे । ती संक्रमित साँझपख आएँ । बेड अर्कै संक्रमितले कब्जा गरिसकेको थियो । उनी पल्लो पट्टीको खाली भएको ३५ नम्बरको बेडमा गएर सुते ।
खासमा उनी अस्पतालमा के बस्नु भनेर घर गएर सुतेका रहेछन् । उनी अस्पतालमा फर्किएर आएपछि एकपटक डायलिसिस गरे अनि म यहाँ बस्न सक्दिन भनेर घरै फर्किए ।
६) शव व्यवस्थापन
कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेपछि शव व्यवस्थापन गर्न अलिक समस्या रहेछ । म संक्रमणमुक्त भएपछि निर्देशक केदार सेञ्चुरीलाई भेटेर यसबारेमा जानकारी गराएको थियो । म आफैले र अर्को साथीले कसरी शव व्यवस्थापन गर्यौ भन्ने पनि जानकारी गराएँ, यी माथि उल्लेख गरिएका सबै कुराको पनि बेलिविस्तार लगाएँ । बिस्तृतरुपमा ब्लग पनि लेखिसकेको छु ।
७) डाक्टर आउन समस्या
उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु भएपछि एकदिन आन्दोलन भयो । २४ घण्टामा कम्तीमा सके २ पटक नत्र एक पटक भए पनि डाक्टर आउनु पर्ने माग राखेर राति ११ बजेसम्म झगडा गरे । आक्रोशित बिरामी र कुरुवा शान्त भएपछि राति डाक्टर आउनु भयो ।
उहाँ आफै विद्यार्थी पनि भएको र एक्लैले ८० जना बिरामी हेर्नुपर्ने भएकाले भनेको समयमा र हरेक दिन बिरामी हेर्न आउन नपाएको उहाँले तर्क गर्नु भयो । साथै अर्को एकजना डाक्टर अस्पताल नै नआउने भएकाले सबै जिम्मेवारी आफूले मात्रै भोग्नु परेको बताउनु भयो । तर अबका दिनमा सकेसम्म बिरामीलाई हेर्न दिनमा एकपटक भए पनि आउने बाचा पनि गर्नु भयो । ताकी दिउँसो उपचार नपाएर मरेको बिरामीको नियती अर्को बिरामीले भोग्नु नपरोस । यस्तो अवस्थामा पनि हरेक दिन खटेर संक्रमितको सेवा गर्ने उहाँलाई हृदयदेखि नमक प्रकट गर्दछु ।
८) नियमित सरसफाई र सेनिटाइजेसन
आइसोलेसन वार्डमा काम गर्नका लागि सबैलाई गाह्रो हुन्छ । पीपीई लगाएर आफूलाई जोखिममा राख्दै उपचार गर्ने सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । अझ सबैभन्दा बढी त सफाइ गर्ने कर्मचारीहरुले जे जति काम गर्नु भयो उहाँहरुलाई विशेषरुपमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैमा जोड्छु, तर कहिलेकाँही समयमै फोहोर नउठ्दा हुने समस्या पनि समाधान भयो भने र सेनिटाइजेसन नियमितरुपमा भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुका केही कमी कमजोरीहरुलाई आलोचना गर्न उचित ठानिन । र, गर्दिन पनि ।
९) संक्रमितले नै संक्रमितको उपचार
मानवीय दृष्टिले पनि यो राम्रो काम हो । एकजना भाइको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । आफै संक्रमित भए पनि सबैभन्दा वार्डमा रहेको ४४ वटा बेडमा रहेका सबै सबैभन्दा बढी सेवा गर्ने उनी एक्ला थिए । भर्ना हुन आउनेलाई बेडसम्म पुर्याइदिने, कहिलेकाँही औषधि दिने, प्रेसर र ज्वरो नापिदिने, डाक्टर र नर्सलाई फकाएर, गाली गरेर भए पनि बोलाइदिने र जुनबेला पनि सेवा गरिहाल्ने स्वभावले अस्पतालमा भर्ना हुने सबै बिरामीलाई केही पर्यो कि उनैलाई बोलाउन आइहाल्थे । बिरामीको उपचार गर्दागर्दै कोरोना संक्रमित भए पनि स्वास्थ्यकर्मी भएका नाताले एकजना नर्सले बिरामीलाई औषधि दिन, ब्लड तान्न पनि सहयोग गरिन् । यसलाई पनि राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ । यसले हतार हतारमा पीपीई लगाएर संक्रमितको उपचार गर्न आउनका लागि नर्स आउनु पर्ने बाध्यता पनि कम भएको थियो ।
संक्रमित र कुरूवाले संक्रमितको सेवा गर्दै
संक्रमित नर्सले उपचार संक्रमितकै उपचार गर्दै
१०) समयमै रिपोर्ट आइदिए हुन्थ्यो
संक्रमित भर्ना भएको वा पहिलो पटक स्वाव लिएर पोजिटिभ देखिएको १४ दिनमपछि वीर अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाव लिइन्छ । लक्षण कम भएर निको हुँदै गरेका बिरामीको हकमा १४ दिनपछि रिपोर्ट पोजिटिभ नै आए पनि होम आइसोलेसनमा जान पाइन्छ । धेरै जना त्यसरी पनि घर फर्किएका थिए । जसका कारणले अस्पतालमा बेड खाली पनि हुने भयो ।
अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको रिपोर्ट प्राथमिकताका आधारमा भोलिपल्टै आइदियो भने सहज हुन्छ । अन्य रोग भएका बिरामीले अर्को अस्पताल वा वार्डमा गएर उपचार पाउँछन् भने निको भइसकेका संक्रमितहरु डिस्चार्ज भएर घर जान पाउँछ । अस्पतालमा बेड खाली हुन्छ ।
मैले स्वाव दिएको ४ दिनमा रिपोर्ट आएको थियो । राति ११ बजे रिपोर्ट आए पनि मलाई डिस्चार्ज हुनका लागि अर्को दिनको दिउँसो साढे ४ बजेसम्म कुर्नु पर्यो । मसँगै ८ जना डिस्चार्ज हुँदै थिए । जसमा केही लक्षण नभएका पोजिटिभ पनि थिए । अस्पतालमा हामी डिस्चार्ज भएपछि थप १४ वटा बेड खाली हुने थिए । जसमा अस्पतालको बेड कुरिरहेका संक्रमितले समयमै बेड पाउने थिए । आशा छ त्यो पनि अब सुधार होला ।
र, केही आफ्नै कुरा ।
लगातार ५ दिनपछि ज्वरो कम भयो । औषधिले छिट्टै काम गर्यो । फर्किएर आएन । तर घाँटी दुख्ने समस्या अस्पताल भर्ना भएको ९/१० दिनसम्मै चल्यो । श्वासप्रश्वासमा समस्या पनि देखियो । अलिकति हिँड्दा र फोनमा अलिक धेरै समय बोल्नु पर्दा श्वास फेर्न समस्या भएको अनुभव भयो । त्यतिञ्जेलसम्म गन्ध र स्वादको समस्या ज्यूँका त्यूँ थियो । हल्का पखला पनि लागेको थियो । केही दिन हल्का टाउको पनि दुख्यो । खोकी पनि एक साताभन्दा बढीसम्म नै चल्यो । अहिलेसम्म खोकीको अंश बाँकी नै छ ।
यसबीचमा भिटामिनका चक्की, सिटामोल र भेटे जतिका जडिबुटी, आयुर्वेदका औषधि र असाध्यै धेरै तातो पानी सेवन गरेर अन्ततः कोरोना ‘पोजेटिभ’ बाट नेगेटिभ बनाइयो ।
रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि वीर अस्पतालबाट फर्कने क्रममा
र, अन्त्यमा १७ दिन अस्पताल बस्दा सबै प्रकारका बिरामी र बिरामीपिच्छेका फरक-फरक लक्षणले कोरोना यही हो भन्न सकिएन । तर कोरोनासँगै अर्को रोग छ भने जोखिम असाध्यै हुने रहेछ । लक्षण सामान्य हुँदा पनि श्वासप्रश्वासमा समस्या धेरै बिरामीमा देखियो ।
कसरी बढाउने बिजुली खपत ?: कुलमान घिसिङको लेख
पर्यटनमा पञ्चवर्षीय योजनासँगै खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यताः योगेन्द्र शाक्यको लेख